အသီးမှာ သရက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အသီးမှာ သရက်
Posted by manawphyulay on Jun 5, 2012 in Photography | 20 comments
အိမ်က အပင်မှ သရက်သီးခူးရင်းနဲ့ ရိုက်ကြည့်ထားတာပါ။ အလုံးက ကြီးပေမယ့် အရသာ သိပ်မရှိပါဘူး။ မသိတဲ့သူတွေကတော့ အိမ်ခြံကနေဖြတ်သွားတိုင်း အပင်ကို မော့ကြည့်တဲ့သူတွေပါပဲ။ တချို့ဆို ခဲနဲ့ပစ်ချတဲ့သူတောင် ရှိပါတယ်။ မိုးတွင်းကြွေချိန်ဆို အိမ်နားက လူတွေတောင် လာမကောက်ကြပါဘူး။ အလုံးအဖန် ကြီးပြီး လှသလောက် စားရတာ အရသာမရှိလို့ပါပဲ။
အိမ်က အပင်က ခုတုန်းလေး ရိုက်ကြည့်ထားတာပါ
အလုံးတော့ အတော်ကြီးတယ်။ အရသာတော့ မရှိလှပါဘူး။
သရက်သီးပါလား အိုးတို့က မချစ်စုသရက်ဆိုပိုကြိုက်တယ် အရသာမရှိဘူးဆိုတော့ သရက်မျိုးမတောင်းတော့ဘူး နော် မမမနော။
တောင်းမှာစိုးလို့ ကြိုပြောထားတယ်လေနော် စနိုးလေးရေ အရသာမရှိတာကိုတော့ မျိုးမတောင်းနဲ့တော့ သိလား…
အသီးမှာ သရက် အဆီမှာဝက်
အပေါ်ဆုံးပုံက သရက်သီးလေးစားချင်ထှာ။ မနောရေ ကျွေးမှာလား???????????????။
ကျွေးပါတယ်။ နောက်မှ မနော ကျွေးတာ အရသာလည်းမရှိဘူး မလုပ်နဲ့နော်။ စားလို့ရနေတဲ့အနေအထားမို့ ခူးလိုက်တာပါ။
နယ်ကအိမ်မှာ ဘင်္ဂလား သရက် ဆိုတာ ရှိဘူးတယ်။
အစိမ်းမှာ အမှည့်မှာ အရသာမရှိပေမယ့် အကင်းဘ၀မှာ ငါးပိရည်နဲ့တို့စားလို့ကောင်းတယ်။
ခွဲပြီး အခြောက်လုပ်ထားရင်လဲ သရက်သီးသနပ်လုပ်တဲ့အခါ အချဉ်မစူးလို့ ပိုစားကောင်းတယ်။
အခုပုံထဲကသရက်သီးနဲ့ ဆင်တူသလိုရှိလို့ သတိရတာနဲ့ မန့်လိုက်တာပါ…။
ဟာဗျာ အသီးမှာ သရက်မဟုတ်ပါဘူး
အရသာ မရှိဘူးဆိုလို့ စားတော့ပါဘူးဗျာ ..
ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်သွားဒယ် …
တချို့အသီးအနှံတွေက ပင်မှည့်ဆိုရင် ပိုကောင်း ကြပေမယ့်
သရက်သီးကတော့ အုပ်မှည့်မှ ပိုကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဦးပါပြောသလို အမှည့်မှာ စားမကောင်းရင်
အစိမ်းမှာ သရက်ယိုထိုးစား ကြည့်ပါလား။
ဒီမလေးရှားမှာတော့ သရက်သီးက တစ်နှစ်ကို နှစ်ခါ သုံးခါလောက်သီးတယ်.. မိုးက အပတ်တိုင်းနီးပါးရွာတာကိုး.. လမ်းဘေးက သရက်ပင်အနိမ့်လေးတွေမှာ အသီးတွေကြီးကြီးငယ်ငယ်ရှိနေကြတာ ဒီက လူကြီးမပြောနဲ့ကလေးတောင် ခဲနဲ့ မထု ခူးမစား/ခိုးမစားကြဘူး… သရက်သီးကိုဈေးထဲမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နေ့ တိုင်းဝယ်စားလို့ ရတယ်.. ဒါပေမယ့် မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရွာကမချစ်စုသရက်သီးအရသာကိုတေ့ာ ဘယ်သရက်သီးမှ မမှီသေးဘူးထင်တယ်
a: pay thwar par tal May Manaw. Sar gin seik lal pauk tal byar. Myanmar lo ma yae tet they loz
dee louk ne yap p.
အဲလောက်ကောင်းတဲ့ သရက်သီးဆို တလုံး၂ဒေါ်လာတော့ ရှိမယ်။ အပေါဆုံး သုံးလုံးငါကျပ်ပဲ။ ဒီမှာရှိတဲ့သရက်သီးတွေက အစေ့ထူ အသားနည်းတယ်…စားဖို့တန်ဖူး..။ သက်သက်သာသာ သရက်ချိုရည်ပဲ ဝယ်သောက်တယ်။ (သရက်အနှစ်နည်းနည်း မန်ကျည်းရည်များများ ရောထားတာလေ)
အခုမှဘဲ သိရပါတော့တယ်ရှင့် ။ တော်တော်ထူးဆန်းတာပါလားရှင့် ။
ကျွန်တော်ကလည်း.သရက်သီးမှည့် ဆို အရမ်းကြိုက်..။
အခု သရက်သီးတွေက …စာချင်စရာ..။
ခူးယူလို့ မရလို့ .. …. စ်ိတ်ညစ်ပြီး.ပြန်သွားပါပြီ.။
အသီးမှာသရက် ဆိုပြီး စားမကောင်းရင်တော့ ခုပ်သာပစ်လိုက် နောက်ကောင်းတဲ့အပင်သာထပ်စိုက်လိုက် manawphyulay လေးရေ
အရွက်မှာ လဖက် ..
အရက်မှာ Red …